Cuentos Barnaamijyadeena iyo Bulshadeena: Oktoobar 2021 - El Centro de la Raza
Cuentos Barnaamijyadayada iyo Bulshadayada: Oktoobar 2021
Posted on October 4, 2021 October 12, 2021 author Becca CramerCategories News, Newsletter, UncategorizedTags Sheeko, Latino, News, Stories
ECDLR Antojitos Lita Rosita u gaar ah ayaa laga xusaa Emerald -ka Koonfurta Seattle!
“Rosa Juarez mar walba wuxuu lahaa riyada furitaanka Antojitos Lita Rosita laakiin marnaba ma hubin sida loo bilaabo. Waxay ka baratay Barnaamijka Ku -shubista Cuntada oo ay maamusho El Centro de la Raza waana ogaa inay iyada ahayd fursaddii ugu fiicnayd. Waxay cunto ka siinaysay Plaza Roberto Maestas tan iyo Abriil 2019 kuna nooshahay riyadeedii. ”Waxaa qoray Jax Kiel at the Koonfurta Seattle Emerald.
“Waxaan ogaaday maradaan la xardhay oo ku dheggan tiirka taleefanka ee geeska ka soo horjeeda El Centro de la Raza, ee 16th Avenue S. iyo Street Bayview. Farriinta kaliya ma aha mid aad u macaan, ee waa xaqiiqda ah in qof uu waqti u qabtay inuu tolo oo soo bandhigo. ”
- Steve Wells, Horumarinta
Ma haysaa fikrad ganacsi, laakiin ma hubtid waxa xiga ee la sameynayo?
Marcos Arellano ee Shark Qaniinyada Ceviche
El Centro de la Raza Barnaamijka Horumarinta Ganacsiga Yaryar waxay siisaa milkiileyaasha ganacsiga yaryar iyo kuwa doonaya inay ganacsatadu yeeshaan aqoon isweydaarsiyo, talo horumarinta ganacsiga, la-talinta deynta, iyo helitaanka ilo kala duwan oo dhammaantood ujeedadoodu tahay inay kobciso xasilloonida maaliyadeed iyo madax-bannaanida muddada-dheer. Deeqahaagu waxay xaqiijinayaan inaan sii wadi karno bixinta adeegyada qiimaha leh.
Ma sameyn karno waxyaabaha aan sameyno adiga la'aantiina.
Fasalada e ku qoran barnaamijyada nuevos
Nagu Taageer Qaadashada Acciónes
Previous post Previous: Ogeysiisyada Oktoobar iyo Maqaallada Quseeya Bulshadeena
Next post Next: Dhisidda Bulshadii La jeclaa Gala 2021